Ubudlelwane obutsha beBhutan-Israel
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeBhutan Breaking » Ubudlelwane obutsha beBhutan-Israel
Iindaba zeBhutan Breaking • Ukwaphula iindaba zakwa-Israyeli • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Disemba 26, 2020
iflethi ye-bhutan pixabay
Isizwe esincinci soMzantsi Asia sinobudlelwane bezopolitiko kunye nenani elincinci lamazwe kunye nemilinganiselo yempumelelo yayo esekwe kwisalathiso solonwabo sikazwelonke
I-Israel ngoMgqibelo ibhengeze ukuba iseke ubudlelwane bezopolitiko neBhutan, ilizwe lesihlanu ukwenza njalo kwiinyanga nje ezidlulileyo kunye ne-United Arab Emirates, Bahrain, Sudan kunye neMorocco. Kodwa iBhutan ayililo ilizwe lama-Arabhu, kwaye uninzi lwabantu oluva iindaba malunga nesivumelwano esiqhelekileyo mhlawumbi bazibuza, "Yintoni iBhutan?"
Ummeli wakwa-Israyeli e-India u-Ron Malka kunye ne-Bhutan ye-Bhutan e-India Vetsop Namgyel batyikitye isivumelwano sokumiswa ebusuku. Ukutyikitywa kwesivumelwano kuza emva kweengxoxo ezifihlakeleyo phakathi kwamagosa aphuma kuwo omabini la mazwe, kubandakanya nokutyelelana, kwiminyaka yakutshanje malunga nokuseka ubudlelwane bezopolitiko, ngokutsho komphathiswa wezangaphandle, oqwalasele ukuba usebenza neBhutan kwiCandelo laseMashav, iArhente yoPhuhliso lwaMazwe ngaMazwe. Intsebenziswano. Ngale nto, abafundi abavela eBhutan beze kwa-Israyeli ukuze bafumane uqeqesho kwezolimo.
Ngokwengxelo edibeneyo malunga nesivumelwano, amazwe aceba ukusebenzisana kuphuhliso lwezoqoqosho, ezobuchwepheshe kunye nezolimo. Ikwathi ukutshintshiselana ngokwenkcubeko kunye nokhenketho kuya "kuphuculwa ngakumbi."
"Esi sivumelwano siza kuvula amathuba amaninzi okusebenzisana ukuze kuzuze abantu bethu bobabini," utshilo uMalka.
Ilizwe laseMzantsi Asiya iBhutan, elaziwa njenge "Land of the Thunder Dragon," lilizwe elincinci elinomhlaba elikumda osempuma weHimalaya. Umda weTibet ngasentla kunye neIndiya emazantsi kwaye unabemi abangaphantsi kwama-800,000. Ikomkhulu layo kunye nesona sixeko sikhulu yiThimphu. Indawo yelizwe zii-14,824 zeekhilomitha (iikhilomitha ezingama-38,394), iyenza malunga nobukhulu belizwe laseMelika iMaryland.
Inkolo yaseburhulumenteni yaseBhutan yi-Vajrayana Buddhism, eqhutywa ukuya kuthi ga kwisithathu kwisine sabemi belizwe. Enye ikota yabemi basebenzisa ubuHindu. Inkululeko yenkolo iqinisekisiwe kwaye ukuguqula abantu akuvumelekanga ngurhulumente wasebukhosini.
IBhutan yaba bubukhosi bomgaqo-siseko xa ibibambe unyulo lwayo lokuqala jikelele ngo-2008. Ngaphambi koko, yayingumbuso wobukhosi opheleleyo. Itayitile esemthethweni kakumkani nguKumkani weDragoni.
Ilizwe linobudlelwane obusemthethweni nozakuzo kunye namazwe angama-53 kuphela, kwaye laba lilungu leZizwe eziManyeneyo ngo-1971. I-United States ne-United Kingdom, umzekelo, ziphakathi kwamazwe angenabo ubudlelwane obusemthethweni neBhutan. Ilizwe linoonozakuzo kumazwe asixhenxe kula mazwe angama-53, kwaye yi-Indiya, iBangladesh neKuwait kuphela enabameli baseBhutan. Amanye amazwe agcina unxibelelwano olungekho sesikweni ngoonozakuzaku abakumazwe akufuphi. I-Intanethi kunye nomabonwakude zazivunyelwe ukungena elizweni ukuqala ngo-1999.
IBhutan igcina ubudlelwane bezoqoqosho obomeleleyo, obucwangcisiweyo, kunye nobezomkhosi kunye ne-India, kwaye inobudlelwane obomeleleyo bezopolitiko kunye noonozakuzaku ne-Bangladesh. Ukuthunyelwa kwayo ngamandla ngumbane ophehlwa ngamanzi ukuya eIndiya. Ilizwe livaliwe ikakhulu kubantu bangaphandle ngakumbi abavela ngaphandle kwe-Asia yoMzantsi, njengendlela yokugcina inkcubeko yelizwe kunye nokugcina izibonelelo zendalo. Nangona ilizwe lithintela umda wokhenketho, abemi baseIndiya nabaseBhutan banokuhamba besiya kwamanye amazwe ngaphandle kwepaspoti okanye ivisa. IBhutan yavala umda wayo neChina ekufuphi emva kokuhlasela kweTibet eChina ngo-1959
Ulwimi lwaseburhulumenteni kweli lizwe sisiDzongkha, esikwabizwa ngokuba yiBhutanese, nolunye lweelwimi ezingama-53 zesiTibetic ezithethwa kuMbindi weAsia. IsiNgesi, nangona kunjalo, lulwimi lokufundisa kwizikolo zaseBhutan.
IBhutan yaziwa njengelona lizwe lonwabileyo emhlabeni kwaye, ngenene, ukulinganisa ilizwe nge-Gross National Happiness Index yasekwa ngonyaka ka-2008 ngurhulumente waseBhutan kumgaqo-siseko wayo kwaye ikwindawo ephezulu nangaphezulu kwimveliso yelizwe. Oku kunengqiqo, kuba iBhutan lelinye lawona mazwe ahlwempuzekileyo emhlabeni, ngenqanaba lentlupheko leepesenti ze-12.
Kwii-foodies eziphakathi kwethu, iBhutan inayo ezinye izitya zayo zemveli. Esona sitya sicetyiswayo sesizwe kuthiwa yi-Ema Datshi, indibanisela yeetshilisi kunye netshizi. Okunye ukutya kwesiNtu kubandakanya uJasha Maroo, okanye uMaru, oyinkukhu eqhwethayo, kunye nePhaksha Paa, okanye inyama yehagu eneentsholongwane ezibomvu.
Ngelixa iBhutan yaziwa njengendawo ekhuselekileyo kakhulu kwaye ubusela bunqabile, iLonely Planet ithi kukho iingozi kunye nokucaphukisa ekufuneka ujongiwe, kubandakanya: izinja zasesitalatweni zenza ingxolo enkulu ebusuku kwaye umgada uyingozi; iindlela zirhabaxa kwaye zibhetyebhetye; Amaqela angamaNdiya okwahlulahlula asebenza ngaphesheya komda ukusuka mpuma mpuma weBhutan; kwaye imvula, ilifu, ikhephu neengxondorha zinokuchaphazela ukuhamba ngendlela nangomoya.
IBhutan yaziwa ngokuba zii-monasteries zayo, iinqaba - ezaziwa ngokuba zii-dzongs-kunye neendawo ezimangalisayo zomhlaba. Iindwendwe kufuneka nokuba zibe ngabakhenkethi kuhambo olucwangcisiweyo, oluhlawulelwa kwangaphambili, olukhokelwayo, okanye iindwendwe zikarhulumente. Banokungena kweli lizwe njengondwendwe "lobumi bokuma okuthile" okanye nombutho wamavolontiya.
by UMTSHATO WOMTSHATO, INGXELO YAMAJELO EENDABA
I-Al Al Israel Airlines isungula inqwelomoya ngqo ...
I-Lufthansa Ibaleka Abantu abangama-76,000 abasuka kwisikhululo senqwelomoya iFrankfurt ...
I-137 yabakhenkethi baseRussia bodwa eCuba emva kovavanyo ...
Uninzi lwabakhenkethi baseHawaii bagonywe ngokupheleleyo i-COVID-19
Inkxaso mali yezokhenketho inciphise njengokuya eHawaii
ISwitzerland ivula imida yayo kwi-Gulf egonyelweyo ...
Umlilo omkhulu kunye nokuqhuma: Indlovu kunye nenqaba yaseLondon ...
I-Boeing yonyula iGosa lezeMali eliyiNtloko elitsha
I-Emirates iphinde ibuyise iinqwelomoya eMauritius, njengesiqithi ...